Rodorodo famindra - ewa.mg
News - Rodorodo famindra
Ilazana hafainganam-pandeha ny
rodorodo famindra. Matetika, ny olo-mahery sy ny matanjaka ny
mahavita manao rodorodo famindra fa tsy ho an’ny osa sy ny kely
aina. Hita taratra amin’ny fiainam-pirenena ankehitriny koa io teny
io. Manao rodorodo famindra ny asa ataon’ny fitondram-panjakana.
Tsy miandry ny tsy afaka ary toy ny baolina eny ambony kianja tsy
miandry marary fa avoaka ivelany hotsaboina izay maratra.
Voatery manao fingana sy daka
ambadika ireo very amin’ny rodorodo famindra. Manao izay
hampianjera fotsiny ary tsy manana taktika na teknika afa-tsy
fanaratsiana tsotra izao. Na izany aza, misy lafiny ratsy ihany
ilay rodorodo famindra satria voakitika ny ativilanin’ny
valalabemandry. Manao rodorodo famindra ihany koa ny vidim-piainana
ka tsy vitsy ireo kofona sy sempotra. Anjaran’ny kapitenin’ny ekipa
anefa ny manalefaka kely ilay rodorodo famindra sao sanatria ka ny
iray klioba no sasatra mialoha ny fotoana hahataperan’ny
Misy koa anefa ireo manao rodorodo
famindra, miserana tsy mba manao mbay lalana fa misosososo fotsiny
amin’izao, toa zatra manao lalan-dririnina ka lasa mivily any
an-kady ilay gadon-tongotra. Ilaina hatrany ny fanarahana baiko na
maika hanao rodorodo famindra aza fa tsy handeha hitsambiki-mikimpy
na sanatria hanao an’Andriamanitra ho tsy misy. Rodorodo famindra
ao anatin’ny fanarahan-damina ny tena filamatra. Banjinina ny eo
aloha, todihina ny ao afara mba tsy ho famindra mampidororororo” ny
samy namana ka afabaraka eo ny hiafarany.
Hain’ny mpitazana hatrany ny
manavaka ny rodorodo famindra mankany amin’ny fandrosoana sy ny
mihoriram-pandeha na mijaikojaiko famindra ka na manao rodorodo
famindra aza, tratry ny miadana foana.
L’article Rodorodo famindra a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 14/07/2021
Fepetra ara-pahasalamana :: Mikatona dimy ambin’ny folo andro ny Tranombokim-pirenena
Mihidy mandritra ny dimy ambin’ny folo andro ny Tranombokim-pirenena, etsy Ampefiloha, araka ny fanapahan-kevitra norasin’izy ireo hoentina manaraka ny fepetra nolazain’ny Filohan’ ny Repoblika, tamin’ny sabotsy lasa teo. “Manadio, mamerina ny fandaminana ny boky, nanomana fitsipika anatiny ho amin’izay ho avy manaraka eo izao no ataonay », hoy Raonison Njaka, tale mpitantana ny Tranombokim-pirenena Anosy. Ankoatra izay, nofoanana avokoa ireo hetsika ara-kolontsaina mandritra an’ity volana avrily ity. Fanafoanana hetsika Ankoatra izay samy manana ny fomba hoentiny miady amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19 avokoa ireo ivon-toerana fandraisana lanonana sy hetsika ara-kolontsaina eto Antananarivo. Ho an’ny Cercle Germano-Malagasy na CGM-GZ Analakely, efa tamin’ny kabary voalohany nataon’ny ny Filohan’ ny Repoblika no tsy nandray hetsika ara-kolontsaina izy ireo fa nafindra tany amin’ny toerana malalaka izany. Vao tsy ela akory anefa no nofoanana ihany koa ny hetsika arakolontsaina vokarin’ny CGMGZ, rehetra na ivelan’ny ivontoerana aza. Ankehitriny fantatra fa miato mandritra ny dimy ambin’ny folo andro ihany koa ny fampianarana. Na izany aza, misy ireo ivon-toerana izay mahita paikady manokana handraisana an’ireo mpitsidika sy ireo hetsika ara-kolontsaina. Isan’ izany ny Institut Français de Madagascar IFM Analakely izay mamokatra seho hifanatrehan-tava ihany saingy tsy mihoatra ny dimampolo ireo mpijery. Ho an’ny famakiana sy findramana boky kosa dia nanana safidy roa ny rehetra. Na tonga eny an-toerana saingy voafetra ny fotoana hijanonany ao, na mamandrika ny boky an-tambajotra. Torak’ izay ihany koa ny etsy amin’ ny Alliance française an’Antananarivo Aft Andavamamba. L’article Fepetra ara-pahasalamana :: Mikatona dimy ambin’ny folo andro ny Tranombokim-pirenena est apparu en premier sur AoRaha.
KMF/Cnoe: “Mbola azo atao amin’ity taona ity ny fifidianana ben’ny Tanàna”
“Raha mijery ny fivoaran’ny toe-draharaha politika amin’izao ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, mbola matoky fa azo atao tsara amin’ity taona ity ny fifidianana eny anivon’ny kaominina, na ambanivohitra na ambonivohitra io.”Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fanatanterahana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna nokasain’ny Ceni hatao ny 28 oktobra. Toy ny tolo-kevitra rehetra, raha nanome vinavinana tetiandrom-pifidianana ny Ceni.Tsy voatery hanaraka izay ny governemanta, izay mpanapa-kevitra hoe rahoviana ny hamoahany didim-panjakana ny amin’izany. Raha manapa-kevitra, ohatra, izy, afaka herinandro vao hataony izay, mbola mety koa izany ny herinandro aorian’ny 28 oktobra.Tsy tsara ny manao fifidianana ao anatin’ny andro ratsyNa izany aza, mila fehezina ihany ny toetr’andro. “Tsy tsara ny manao fifidianana ao anatin’ny vanim-potoan’ny andro ratsy”, hoy izy. Raha ny tokony ho izy, any amin’ny voalohandohan’ny novambra no tokony hanaovana fifidianana. Vita io rehefa teny ierana fa miankina amin’ny fahavononana.Tsy tokony hohadinoina fa fifidianana eny anivon’ny fiarahamonina io, manakaiky vahoaka. Tsy azo anaovana sangisangy izany fa mety hitera-doza raha tsy atao tsara. Mampahazo vahana ny Ceni ny fanaovana fifidianana tsara, na mihemotra andro vitsivitsy aza. Mba hahazoany manao zavatra araka ny tokony ho izy izany.Zava-doza raha manendry PDSRaha sanatria mihemotra amin’ny taona 2020 io fifidianana kaominaly io, ny tsy mahatsara an’izay: manohitra ny demokrasia. Olom-boafidy ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina eo anivon’ny fiadidiana ny Tanàna, ary manana ny fe-potoam-piasany. Tsy voahaja ny lalàna mifehy izay fe-potoam-piasana izay, raha mihemotra ny fifidianana. Tan-dalàna ny firenena demokratika. Tsy demokratika rehefa tsy tan-dalàna intsony.Hohalavaina ve ny fe-potoam-piasan’ireo olom-boafidy ireo, ary alalana avy aiza? Mbola tsy fanajan-dalàna ihany koa izay. Sa hosoloina PDS? Vao mainka zava-doza: lasa olom-boatendry izany fa tsy olom-boafidy. “Hita be izany hoe misy paipaika maloto ao anatin’ilay raharaha, raha vao hatao PDS avokoa ny mitantana ny kaominina”, hoy izy. Aleo aza mihafihafy amin’ny fanalavana fe-potoam-piasana, nefa tsy ara-dalàna izay.R.Nd. L’article KMF/Cnoe: “Mbola azo atao amin’ity taona ity ny fifidianana ben’ny Tanàna” a été récupéré chez Newsmada.
Vakoka manan-tantara: nohajarina ny toerana misy ny vaton-dRazaka
Mitahiry tantara satria nahatonga ny anaran’ny tanàna. Vakoka mampiavaka an’Ambatondrazaka ilay vaton-dRazaka ao an-drenivohitry ny faritra Alaotra Mangoro. Hanomezana haja sy hampisongadina ny vakoka, nitondran’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina fanatsarana ny toerana misy ny vato. Nisy ny fitsidihana ny fahavitan’ny asa izay nataon’ny minisitra Andriatongarivo Lalatiana sy ireo mpiara-miasa aminy, ny faran’ny herinandro teo. Tafiditra tao anatin’ny fandaharam-potoan’ny minisitera, izay namita hetsika marolafy tany an-toerana, rahateo izany. Raha araka ny lovan-tsofina, manamarika ny nahazoan-dRazaka zaza tamin’izany fotoana izany io vato io ka izany no nametrahana azy ho toerana mifono tantara sy kolontsaina. Afaka manome fanazavana ireo te hitsidika ny toerana ny tompon-tany satria fiarah-miasa amin’ireo taranaka sy ny minisitera no nahafahana niroso tamin’ny fanajariana. Efa azon’ny mpizahatany rehetra tsidihina rahateo ny toerana.Zo ny AinaL’article Vakoka manan-tantara: nohajarina ny toerana misy ny vaton-dRazaka a été récupéré chez Newsmada.
ITM 2019: maro ny loka natolotra
Nahomby tanteraka ny Hetsika iraisam- pirenena ho an’ny fizahantany (ITM), andiany 2019, natao teny amin’ny foibe CCI Ivato farany teo. Nikarakara azy ny Ofisim- pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara ( ONTM), niaraka tamin’ny minisiteran’ny Fizahantany. Marihina, fa firenena vahiny nasaina manokana tamin’ity hetsika ity ny any Indonezia. Nampahafantarina, ny alakamisy teo, ireo tsara vintana, nandritra ny lalao antsapaka sy “tombola”, tamin’ity ITM ity.Mandroso amin’ny fizahantany i IndoneziaNotsorin’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny ONTM, i Boda Narijao, fa anisan’ny tanjona nikarakarana ny karazana lalao samihafa, ny ahafahan’ny Malagasy nitsidika ny ITM 2019 ny lanjan’ny fizahantany sy ny zavaboahary eto Madagasikara, ny aty amin’ny faritra manodidina ny ranomasimbe Indianina.Nomarihiny manokana koa, fa tsy tongatonga ho azy ny naha firenena nasaina manokana an’Indonezia, satria ankoatra ny fitovizana amin’ny lafiny maro (ara-tantara, kolontsaina, endrika sy tarehy, ….), firenena efa tena mandroso amin’ny fizahantany ity firenena ity, ary ataony fanoitra hampandrosoana ny toekarena mihitsy ny sehatry ny fizahantany. Nisy rahateo tamin’ireo nahazo loka, hivahiny any Indonezia.Njaka A.L’article ITM 2019: maro ny loka natolotra a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny trafika: hampiharina ny Dinaben’ny sokake
Niakatra teto an-dRenivohitra mihitsy ireo ray aman-dReny mpitahiry ny lovan-tsofina avy amin’ny foko Antandroy sy Mahafaly, nampahafantatra mikasika ny sokake “radiate”. Amin’izy ireo, tsy azo ekena intsony izao fandringanana ny harena voajanahariny izao, koa hampiharina ny Dinabe, toy ny Dinan’ny omby.Mirongatra ny trafika sokatra amin’izao fotoana izao. Nitondra fanazavana, anisan’ny vaovao tsy fantatry ny besinimaro ireo ray aman-dreny lehibe, mpitahiry sy mpampita ny tantara sy lovan-tsofina avy any amin’ny foko Antandroy sy Mahafaly. Voakasik’izany ny sokatra na sokake “radiate” tsy fahita raha tsy any amin’iny tapany atsimo sy atsimo andrefan’ny Nosy. Nohitsin’izy ireo fa manan-jiny sady manan-danja ara-panahy amin’ny olombelona sy eo amin’ny firohizan’ny tontolo mananaina ny sokake. Izay no mahatonga ny sokake ho fady ho an’ny Antandroy sy ny Mahafaly satria mitondra fitahiana ka tsy fihinana, tsy azo vonoina, tsy azo amidy. Mifandray amin’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenena sy iraisam-pirenena (lalàna Cites), tsy azo hazaina, tsy azo taterina, tsy azo ompiana, tsy azo aondrana any ivelany.Mahatonga ny kere ny famonoana sokatraManoloana ireo, niray feo ireo ray aman-dReny marobe any an-toerana, hanatanteraka sady hampihatra ny “Dinabe ho an’ny sokake”, toy ny efa natao hatramin’izay amin’ny “Dinabe ho an’ny omby”. Hentitra izany lalàna izany, mifanaraka, efa nankatoavan’ny fitsarana tamin’ny marsa 2020 teo. Hiara-kiasa amin’ny mpitandro filaminana, ny fitsarana, ny fitantanam-paritry ny Tontolo iainana ary indrindra ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny sokake, ny Turtle Survival Alliance (TSA) izy ireo).Nomarihin’izy ireo koa fa vokatry ny fanotana ny fady, araka ny fomba Antandroy sy Mahafaly no mahatonga ny orana tsy milatsaka, tonga amin’izao kere mahazo any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy izao. Voalaza fa manohaka ny sokatra rehefa mandindona hilatsaka ny orana.Hentitra ny fomban’izy ireo. Voaozona, esorina amin’ny fianakaviana, tsy miditra am-pasan-drazana ary tsy hahomby amin’izay hataony ireo mandika ireo fomba ireo. Ara-tantara, hitan’ny ankizy teny amin’ny amorom-pasika ny soka-dranomasina na fano vao foy, nivoaka tamin’ny akorany ka nahatonga azy ireo niteny hoe :”sokake”, midika sokatra. Nisy tamin’ireo niverina an-dranomasina, ary nisy ny niditra an-tanety. Nivoatra ny endriny, noho ny toe-tany sy ny toetr’andro, ary naka ny endriky ny sokake radiate, hita amin’izao fotoana izao. Araka ny lovan-tsofina koa, nisy nanandrana nahandro hanina tamin’ny hodi-tsokatra ny mpanjaka Andriambahoaka tany atsimo, saingy tsy nahamasaka ny sakafo fa vaky ho azy foana, nahatonga ny sokake ho fady ihany koa. Mandro aminy kosa rehefa haka fitahiana.Nampahafantarina tetsy Antaninarenina, ny asabotsy teo, ny nahazo ny loka tamin’ny fifaninanana naka sary sokake radiate. Njaka AndriantefiarinesyL’article Ady amin’ny trafika: hampiharina ny Dinaben’ny sokake a été récupéré chez Newsmada.
Fahatongavan’ny papa François: hanolotra seho goavana ireo “Kintan’i Gasikara”
“Mpamafy fiadanana sy fanantenana, miaraka amin’ny papa François”. Io ny lohahevitra voizina amin’izao ankatoky ny fitsidihan’ny papa ray masina eto Madagasikara izao. Ho fanomanana izany fotoan-dehibe izany, hisy ny seho goavana hatolotr’ireo mpanakanto kazala ampolony maro, hotontosaina etsy amin’ny Coliseum, ny alahady 28 jolay izao manomboka amin’ny 11 ora antoandro. “Kintan’i Gasikara” ny anarana nampisalorana ireo mpanakanto satria samy mamiratra maromaro izy ireo no hifandimby sehatra amin’io. Anisan’izany ireo hita anatin’ilay rakitsarin’ny hira faneva, toy ny tarika Ny Ainga, i Jaojoby, i Dah-Mama, i Bakomanga, i Simonda, i Farakely, ary i Théo Rakotovao. Eo koa ireo kalaza toa an-dry Stéphanie, i Samoëla, i Firmin, i Odyai, i Rak Roots, i Tsiliva, i Ventsonkira, i Marion, i Haga, sns. Hamarana ny fotoana ny tarika Rossy, izay efa nanomana ireo hira voarakitra ao anatin’ny fihirana katolika, hiaraha-miredona amin’ity fotoan-dehibe ity. Zo ny Aina L’article Fahatongavan’ny papa François: hanolotra seho goavana ireo “Kintan’i Gasikara” a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Melaky: hanodina vokatra ao Ambararata ny Sahanala
Betsaka ireo vokatra any Melaky, toy ny katsaka, ny vary, ny voanjo, ny tsaramaso, ny lojy, ny soja… tsy tafavoaka mamono antoka ireo mpamboly. Tsy misy lalana, ary ny seranan-tsambo, zara raha miasa. Koa nilaza ny tompon’andraikitra fa hatsangana ao Ambararata, distrikan’i Maintirano, ny orinasa Sahanala ny volana aogositra 2021, ho fiaraha-miasa amin’ny tantsaha hanomezana tombontsoa azy ireo, sy ady amin’ny tsy fandriampahalemana any amin’ny faritra.Mampirisika ny mponina any toerana ny fananganana io orinasa io, hifototra amin’ny fambolena sy ny fiompiana nisy tany amin’ny 30 taona lasa. 238 000 ha ny faritra azo volena any Melaky nefa noho ny olana isan-karazany, 50 000 ha sisa ny voavoly izao ary 30 000 ha ihany ny voatondraka. Andrasan’ny maro ny fahavitan’ny fanajariana ny tany volena amin’ny alalan’ny tetikasa AD2M*.Ireo renirano manondraka velaran-tany: i Beboka, any amin’ny kaominina Antsalova, nahafahana nanondraka 500 ha talohan’ny taona 1981; i Demoka, any amin’ny kaominina Betanatanana, izay efa tany amin’ny taona 1974 no nisy fanajariana farany nahafahana manondraka velaran-tany 700 ha; i Marifilaly, any amin’ny kaominina Marohazo, tsy ahitana vokatra firy ankoatra ny vary ka tokony hanaovana fotodrafitrasa manondraka tanimbary sy karazam-boly hafa any ambanivohitra.Manana vina amin’ny famoahana ny vokatra voahodina koa ny orinasa Sahanala, amin’ny fitaterana an-dranomasina avy ao Maintirano. Tsy ny faritra Melaky ihany no mila fampiasam-bola sy fanajariana, mampiseho ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. R.Mathieu AD2M* : Appui au Développement du Menabe et du MelakyL’article Faritra Melaky: hanodina vokatra ao Ambararata ny Sahanala a été récupéré chez Newsmada.
Didin’ny fampanoavana :: Mpanendaka nalefa eny Tsiafahy
Notsaboina teny amin’ny hopitaly avy eo natao famotorana ary niafara any am-ponja ilay lehilahy voalaza fa mpanendaka niharan’ny fitsaram-bahoaka, teny Ampasika, tamin’ny alarobia 29 jolay lasa teo. Notazonina vonjimaika eny amin’ ny fonjaben’i Tsiafahy izy, rehefa avy natolotra ny Fampanoavana omaly. Vehivavy iray no niharan’ny fandrobana sy herisetra nataon’ ny mpanendaka teny Anosimasina Bemasoandro Itaosy, tamin’io alarobia io, ka tonga nitaraina teny amin’ny polisy. Voasambotra sy efa nodarohan’ny olona kosa ilay voalaza fa mpanendaka. Nahitana basy poleta iray tsy nisy bala teny aminy. Tonga nanavotra sy nitondra azy tany amin’ny hopitaly ny polisy. Nentina namonjy mpitsabo ihany koa ilay vehivavy lasibatra, noho ny dona mafy nahazo azy teo amin’ny kibony. L’article Didin’ny fampanoavana :: Mpanendaka nalefa eny Tsiafahy est apparu en premier sur AoRaha.
Douane : Réduire de moitié le délai de dédouanement d’ici 2023
L’Observatoire du Délai de Dédouanement (ODD) figure parmi les instruments qui jouent en faveur de la facilitation des échanges. Rôle majeur. La facilitation des échanges constitue une des clés du développement économique du pays et le dédouanement tient une place importante dans ce processus. Et c’est justement pour cette raison que des efforts ont été entrepris pour accélérer le processus de dédouanement. L’objectif étant de réduire de moitié le délai de dédouanement d’ici à 2023.. Huit sites Mis en place depuis 2011 à Toamasina Port, l’ODD est en effet, un dispositif qui identifie les goulots d’étranglement dans le processus de dédouanement afin de proposer des solutions adéquates. L’Observatoire est actuellement implanté dans 8 sites. A savoir : Mahajanga, Ivato Aéroport, Toliara, Antanimena, Antsiranana, Mamory Ivato, Tolagnaro et Nosy-Be. Quatre autres sites bénéficieront prochainement d’un ODD. Il s’agit, en l’occurrence, d’Antsirabe, Vohémar, Sambava et Antalaha. Malgré l’implantation de ces nombreux sites, les impacts demeurent encore faiblement palpables. À titre d’illustration, le délai moyen de sortie des marchandises est de 15 jours après l’arrivée des navires en 2020, contre 17 jours en 2011. Et pourtant, trois ateliers techniques ont été déjà organisés pour la redynamisation et la réorientation de l’ODD, sous financement du Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PAPSP avec l’appui technique du Programme de Réformes Pour l’Efficacité de l’Administration (PREA). Le premier sur la « Communication et réorientation de l’ODD », tenu en décembre 2019 ; le deuxième portant sur le « Recueil des plans d’actions de toutes les entités intervenant dans le processus de dédouanement dans le cadre de la redynamisation de l’ODD», réalisé en mars 2020 ; et enfin, le troisième sur le « Cadre légal et réglementaire relatif à l’ODD » en octobre 2020. Des ateliers qui ont vu la participation effective d’entités publiques et privées concernées par le commerce extérieur. Recommandations On peut citer, entre autres, les représentants de la Présidence, de la Primature, du PREA, du PAPSP, du Comité nationale pour la Facilitation des Échanges (CNFE), des groupements d’entreprises, de la société GasyNet, des consignataires, de la Société du Port à gestion Autonome de Toamasina (SPAT), des groupements des Commissionnaires Agréés en douane, des Groupements des Professionnels des Commissionnaires Agrées en Douanes – GPCAD), de l’Association Professionnelle des Banques (APB), de la douane au niveau central et des bureaux de douane et de l’Équipe technique de l’ODD. À l’issue de ces ateliers, diverses recommandations ont été recueillies ainsi que des synthèses et plans d’action. Et pour les concrétiser, un atelier de validation sera organisé vendredi prochain. L’objectif étant de réduire de moitié le délai de dédouanement d’ici à 2023. R.Edmond. L’article Douane : Réduire de moitié le délai de dédouanement d’ici 2023 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Douane : Réduire de moitié le délai de dédouanement d’ici 2023 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fotoana fohy taorian’ny fisokafan’ireo H$otel hopitaly nambaran’ny fanjakana fa handraisana ireo mararin’ny valanaretina Covid-19, fantatra fa feno sahady ny efitrano 52 amin’ireo hotely lehibe roa; ny Live Hôtel etsy Andavamamba sy ny Tsanga Tsanga Hôtel, etsy Tsaralalana.Anisan’ny Hôtel hopitaly nisokatra voalohany, ny herinandro lasa teo, ny Live Hôtel, etsy Andavamamba, sy ny Tsanga Tsanga Hôtel, Tsaralalàna, rehefa hita fa tsy maharaka intsony ny toeram-pitsaboana tsy miankina mandray ny Covid-19. ”Feno avokoa ny efitrano 37 ao amin’ny Live Hôtel hatramin’ny omaly ary miandry olona sitrana na koa misy marary mila afindra toerana noho ny fivoaran’ny fahasalamana vao misy efitrano malalaka indray”, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra teny an-toerana. Mizotra tsara tsy misy olana goavana ny fandraisana an-tanana ary ampy ny fanafody sy ny mpiasan’ny fahasalamana manara-maso ny fitsaboana. 10 andro ny saran’ny famandrihana efain’ny marary eo am-pidirana ny toeram-pandraisana fa miankina amin’ny fivoaran’ny fahasalamany ihany. Efa nahazo fiofanana ny mpiasa rehetra hisahana ny asa. Feno marary toy izay koa ny efitrano 15 ao amin’ny Tsanga Tsanga Hôtel hatramin’ny omaly. Manaraka ny fitsaboana maha olona izy ireo, araka ny toromariky ny minisiteran’ny Fahasalamana.Nisokatra, omaly, kosa ny Hôtel hopitaly Motel de Tanà Anosy, manana fandriana 40. Mandray ny tranga Covid-19 antonony ny eny an-toerana ary 60 ny mpitsabo sy ny “paramédicaux” miaraka amin’ny mpiasa hafa mampihodina ny hopitaly. Vita ny fiofanana ary nozaraina ny EPI hoenti-miasa. Mbola mandalo “triage” aloha ny marary tonga hizahana ny fahasalamany satria ny tranga antonony no raisina an-tanana eny. Manana “extracteur d’oxygène” ny Hôtel hopitaly ary ampy ny tahirim-panafody ilaina.Nandray marary nanomboka omaly koa ny Anjary Hôtel Tsaralalàna manampy ireo efa am-perinasa.Manefa hofan-trano ny mararyNohamafisin’ny tomponandraikitra fa iantohan’ny fitondram-panjakana ny fanafody, ny fitsaboana, ny fanaraha-maso ary ireo fitaovana toy ny “concentrateur d’oxygène” izay ampiasaina hitsaboana ireo mararin’ny Covid-19 manaraka fitsaboana amin’ireo Hôtel hopitaly ireo. Anjaran’ireo marary ny miantoka ny hofan-trano sy ireo fanafody hitsaboana ireo aretina mitaiza toy ny diabeta, aretin’ny fo sy ny lalandra.Vonjy A.L’article Firongatry ny valanaretina…: feno mararin’ny Covid-19 sahady ireo Hôtel hopitaly roa a été récupéré chez Newsmada.
Taksiborosy Sprinter nivarina tao ambany tetezana: ankoatra zazakely iray mpandeha ampolony maty tsy tra-drano
Tao Antsahasoa, 10 Km atsimon’Ankaramena, Ambalavao, amin’iny RN 7 iny no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, omaly maraina ity. Nivarina avy eny ambony tetezana ny taksiborosy Sprinter iray mampitohy an’Ihosy amin’i Fianarantsoa. Mpandeha am-polony no indray namoy ny ainy teo no ho eo vokatr’izany.Manao sesilany ny lozam-pifamoivoizana. Taksiborosy Sprinter iray, avy any Fianarantsoa hihazo an’Ihosy ity tra-doza teo amin’ny tetezan’Antsahasoa, fokontany Malazarivo, kaominina ambanivohitr’Ankaramena, distrikan’Ihosy, omaly maraina, tokony ho tamin’ny 07 ora ity. Nivarina avy eny ambony tetezaka ilay taksiborosy ka nidaraboka tery ambany ka potika tanteraka. Araka ny tatitra voaray, ankoatra ireo mpandeha 15 naratra mafy, am-polony no namoy ny ainy teo no ho eo. Anisan’izany ny zazavavikely iray vao 12 taona monja, teny am-pofoin-dreniny, izay fantatra fa namoy ny ainy ihany koaHatramin’ny ora nanoratanay farany, tafakatra 12 ireo maty ary olona 13 isa mbola mitsabo tena. Hatreto, mbola ao anatin’ny fanadihadiana ny mety nahatonga ny loza ny zandarimaria ao an-toerana. Manao antso avo amin’ireo fianakavian’ireo niharam-boina ihany koa ny fokonolona mba hijery ireo havany tra-doza. “Mbola aty Ambalavao ny vata-mangatsiakan’ireo maty hanarahana ireo dingana tokony hatao mahakasika izany raha efa nalefa any amin’ny CSB II Ankaramena, hopitalin’Ambalavao sy Fianarantsoa ireo naratra mafy.”, hoy ny fanazavan’ny zandary. Naratra mafy tamin’ity loza ity koa ny mpamily ny fiara, izay mbola manohy ny fitsaboana ka tsy azo anaovana fanadihadiana.“Fiarana zandary ary tsy manana licence ity tra-doza”, hoy kosa ny loharanom-baovao iray hafa. Mipetraka, araka izany, ny fanontaniana hoe tsy nisy ve izany ny fisavana ny fiara teny an-dalana nahatrarana io taksiborosy io?Mbola teny amin’ny RN7 ihanyNiteraka resabe ireo lozam-pifamoivoizana misessesy efa ho isan’andro. Tsy vitsy ireo nilaza fa ny mpamily mihitsy no fototra mahatonga izany. Ao ireo nanazava fa tsy mbola mahafehy tsara ny fifamoivoizana ny mpamily kanefa dia misetrasetra tokoa rehefa mitondra fiara. Ao koa ireo mpandeha izay mampirisika ny mpamily handeha mafy tokoa noho ny fahamaizany. Ankoatra izay, maro koa ireo naneho hevitra fa tsy mety amin’ny lalana eto amintsika irony fiara Sprinter irony noho ireo mpamily mitsapa ny tanjaky ny fiara rehefa eny amin’ny lalam-pirenena samihafa…Tsiahivina fa vao tsy ela akory izay ilay lozam-pifamoivoizana namoizan’ain’olona maro hatramin’ny zazamenavava teny Anteza, tamin’iny lalam-pirenena fahafito iny ihany. Taorian’ny tranga, nisy ny fampiofanana ny mpamily hisorohana ny tranga toy ireny. Nisy koa ny fepetra napetrak’ireo tomponandraikitra samihafa mandrindra ny lalan’ny fifamoivoizana kanefa izao miverina izao indray. Tokony hisy ve izany ny andraikitry ny ministera hijery manokana ny resaka fifamoivoizana, ny fiara ary indrindra ireo mpamily, izay mampitaraina ny maro tokoa. Henintsoa HaniL’article Taksiborosy Sprinter nivarina tao ambany tetezana: ankoatra zazakely iray mpandeha ampolony maty tsy tra-drano a été récupéré chez Newsmada.